Mareykanka oo sheegay in Al-shabaab weeraro la maagganyihiin Kenya – Radio Daljir
Mareykanka oo sheegay in Al-shabaab weeraro la maagganyihiin Kenya
Febraayo 5, 2019 5:37 b 0
Mareykanka ayaa digniin cusub u dirtay dadka Reer Galbeedka ah ee ku sugan wadanka Kenya, iyadoo sheegtay inay heyso xog ku saabsan in weerarao argagixiso ay ku soo fool leeyihiin.
Qoraal ka soo baxay Safaarada Mareykanka ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in meelaha la bartilmaameedsanayo ay yihiin Suuqyada,Kaniisadaha iyo Meelaha kale ee la isugu imaado, kuwaasoo ku yaala Nairobi, Naivasha, Nanyuki iyo Gobollada Xeebta ah.
Waxa ay ka dalbadeen dadka Ajaanibta ah, gaar ahaan kuwa u dhashay Mareykanka inay taxadar dheeraad ah muujiyaan oo ay iska diiwaan geliyaan qeybta qaabilsan adeegyada dadka safarka ah ee safaarada oo laga heli karo Internetka.
Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa uga digay iney ka baxaan Internetka si ay ula socdaan xaaladooda, dadka aan heysanna waxa ay fareen iney deg deg isaga diiwaangeliyaan Qunsuliyadaha Mareykanka ee wadanka Kenya.
Sirdoonka Reer Galbeedka ayaa ogaaday bishii November ee sanadkii hore in Al-Shabaab ay qorsheynayeen weeraro ay ku qaadaan Kenya, iyagoo durba xogtaas la wadaagay laamaha Amaanka Kenya si looga feejignaado, balse Kenya ayaa ka dhega fureysatay digniinta, iyadoo Shabaab ay weerareen 15-kii bishii hore hoteelka DusitD2 ee ku yaalla magaalada Nairobi ee Caasimada dalka Kenya.
Kenyan oo u muuqatay iney Cashirro ka baratay weerarkii hore iyo digniintii soo gaartay, ayaa durba bilowday howlgal lagu baadi goobayo Ragga weerarkan cusub maleegayo, iyagoo Ciidamo dheerad ahna geeyay meelaha farta lagu fiiqay.
Saraakiisha amniga Kenya ayaa ka cabsi qaba in Kooxaha Argagaixisada ah ay bedelaan goobaha ay weerarada la dmaacsanyihiin, mar hadii xogtooda la fashiliyay.
Culimada Puntland maxaysan uga hadlin amnidarada oo ku saladay kahortagga fanka? (waraysi)
Madaxwaynaha Venezuela oo ka digay dagaal sokeeye oo dalkiisa uu galo